Ministeera Nagaa: 'Buqqaatonni hundu hanga xumura Waxabajjiitti qe'etti ni deebi'u' - BBC News Afaan Oromoo
Ministeera Nagaa: 'Buqqaatonni hundu hanga xumura Waxabajjiitti qe'etti ni deebi'u'
Hanga ammaatti buqqaatonni miiliyoona tokkoofi kuma dhibba sadii qe'ee isaanitti akka deebi'aniifi kunneen hafanis hanga dhuma Waxabajjiitti akka deebi'an Ministeerri Nagaa beeksiseera.
Dhimma buqqaatotaafi nagaa biyyattii irratti ibsa miidiyaaleef kan keennan Ministirri Nagaa Mufariyaat Kaamiil buqqaatotni iddoowwan nageenyi amansiisaa jirutti qubsiifamuu himan.
Hojiin buqqaatota deebisanii dhaabuu sadarkaalee sadii qabu hojjetamaa akka jiran kan himan Aadde Mufariyaat Kaamil, waliigalatti lammiileen milliyoona lamaafi kuma dhibba sadi ol qe'ee isaanirraa buqqa'uu isaanii himan.
''Ji'atti nama tokkoof daakuu kg sadiitu kennama''
Hanga Ebla bara 2010'tti lammiileen miiliyoona 1.2 buqqa'anii turan kan jedhan, Aadde Mufariyaat Kaamil, isaan keessaa lammiileen kuma 500 yemmuu deebi'an kuma 600 osoo hin deebi'in turaniiru jedhan.
Ebla 2010 as immoo lammiileen miiliyoona 1.1 buqqa'uu isaanii himan.
Hojiin buqqaatota deebisuu kunis kan ulaagaa idil addunyaa bifa eeggateen, fedhii buqqaatotaa irratti kan hundaa'e fi kabaja isaanii bifa eegen raawwatamaa jira jedhu.
Lammiileen sababa dhabiinsa nagaan buqqa'an miiliyoona 1.7 yemmu ta'an, kuma 400 ol kan ta'an immoo sababa goginsaan buqqa'an.
Ji'oota lamaan darbanitti hojiin buqqaatota deebisanii dhaabuu hojjetamaa jiraachuu kan himan ministirittiin, hojii kana irratti waajjiraaleen ministeeraa saddetiifi dhaabbileen arjoomtotaa akkasumas naannoleen hirmaachaa jiru jedhan.
Deeggaraa nyaataa wajjin walqabatee hanga buqqaattotni dhaabbidhaan deebi'anii dhaabbatanitti itti fufas jedhan.
Deeggarsa hanga ammaa buqqaatotaaf taasifamaa ture keessaa dhibbentaan 60 mootummaan kan kenname yoo ta'u, dhibbeentaan 40 immoo dhaabbilee arjoomtotaan kan kennamedha.
Kan gara qe'eetti hin deebine miiliyoona tokkoo gadi kan ta'aniidhas jedhaniiru.
Buqqaatonni Gedewoo maal keessa jiru?
Akka gabaasa ministeerichaatti lammiileen miiliyoona 1.5 naannoo tokkoo buqqa'anii naannuma sana keessatti kan qubatan yoo ta'u, kan hafan immoo naannoo tokko keessaa buqqa'uun gara naannoo biraa kan deemaniidha.
Olaantummaa seeraa gama mirkaneessuutiin ji'oota afran darbanitti qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin qindoominaan hojjetamaa turuu Aadde Mufariyaat himaniiru.
Biyyatti keessatti qaamoleen hidhatanii socho'an wajjin walqabatee mootummaan hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuu akka hojjetu himan.
Gama namoota buqqa'iinsa fi walitti bu'iinsaaf sababa ta'an to'annoo jala oolchuutinis shakkamtoota keessaa dhibbeentaa 75 kan ta'an to'annoo jala ooluu isaanii himan.
Namootni naannoo Benishaangul irraa buqqa'an nyaata gahaa argachaa hin jirru jedhan